'UKevin Unako F ** k Ngokwakhe' kunye neeTrope zeTV esizivumayo ukuba siqhubeke - Tv
'UKevin Unako F ** k Ngokwakhe' kunye neeTrope zeTV esizivumayo ukuba siqhubeke
Ukuhlala kwe-CBS UKevin unokulinda unokubizwa ngegama leenkwenkwezi, icocreator, kunye nomvelisi olawulayo uKevin James. Kodwa kwiminyaka emithathu emva kokurhoxiswa kwayo kwe-2018, inokukhunjulwa kakuhle ngesiphelo sika-Erinn Hayes, umdlali weqonga oqale wadlala umfazi kaJames. Kwikhefu phakathi kwamaxesha onyaka, I-Hayes ibhalele ukuba wayeyekile ukuphuma kulo mboniso, apho wayehlala khona ngokufanelekileyo ngendima yakhe ayinikiweyo: isigulana, iqabane elibonakalayo eliselula elibonakalayo lepolisa likaJames elidla umhlala-phantsi eLong Island. (Imithombo ithi abavelisi bakhethe ukuya kwicala elahlukileyo lokuyila, ngokuka Ezahlukeneyo .) Emva koko, UKevin unokulinda songeze ukwenzakalisa. Ngexesha lesibini kunye nelokugqibela, umboniso kaHayes wabulawa ngesiquphe. Emva kweflash phambili, uHayes wathatyathwa ngokufanelekileyo nguLeah Remini-owayedlala kaJames okokugqibela sitcom umfazi, qhubeka UKumkani weQueens . Utshintsho lwalunoburhalarhume ngokungaqhelekanga kwaye ngaphezulu, kodwa lwayicacisa inyani kwindalo iphela: Njenge-archetype, umfazi we-sitcom unciphile kwaye akabalulekanga kangangokuba angatshintshelwa ngaphandle.
Umdlalo weAMC UKevin Unako F *** Ngokwakhe ibuyisela umva le meko ngeendlela ezininzi kunenye. (Umboniso oboniswe kwimpelaveki ephelileyo kwinkonzo ye-AMC + kwaye iqala ngokuqhutywa kwitshaneli yekhebula ngale Cawa.) Njengoko isihloko setroli sicebisa, umboniso ujolise ngqo kuJames nakwinqwelo yakhe yamva nje. Kodwa phantsi komdali uValerie Armstrong ( Iinkosi zesini , Indawo yokuhlala 49 ), UKevin Unako F *** Ngokwakhe Ikwagxeka ngokubanzi. Umdlali weqonga uAnnie Murphy, owaziwa njenge-socialite eyonakeleyo uAlexis Rose ISchitt's Creek , njengo-Allison McRoberts owayekhathazekile, UKevin Unako F *** Ngokwakhe ufuna ukuqhushumbisa olona luvo lokuqonda, indawo yokuhlala, eyinkunzi-Umfazi. Emva kwayo yonke i-schlub enomtsalane ngumfazi owonele ngokwaneleyo.
Ukwenza oku, UKevin Unako F *** Ngokwakhe Ixhomekeke kwisixhobo esikrelekrele ngokugqithileyo. Xa u-Allison ejikeleze i-titular Kevin (Eric Petersen), ilizwe lakhe licaba, likhanyisile, kwaye lisetelwe kwingoma yokuhleka. Wonke umntu ungumdlali ophambili webali lakhe, kwaye uKevin ngumdlalo ohlekisayo malunga nendoda evela kumbindi weMassachusetts othanda amaPatriot kunye nommelwane wakhe uNeil (Alex Bonifer). Ukuya kuthi ga kwinqanaba u-Allison ade abhalise kuKevin, kufana nokuba yi-buzzkill ekrelekrele okanye umntu odlala nje ngokungenelela kwizikimu zakhe zomvundla. Akukho gumbi lamanye amanqaku okujonga xa ubomi bakho bonke busenzeka kwisandi, imizuzu engama-22 ngexesha.
Kodwa xa uAllison eyedwa, yonke into iyatshintsha. Kuthe cwaka kwigumbi; ukukhanya kuyancipha; I-cinematografi iyatshintsha isuka kwiikhamera ezininzi, ukutyikitya ukujonga indawo yokuhlala yesikolo esidala, ukuya kwikhamera enye, ukuseta okuqhelekileyo ngokwesiko. (Cinga Ingcingane ekulu kakhulu Ukuqobisana Iphula kakubi. ) Xa sibona ubomi bukaMcRoberts ekwabelwana ngabo ngokwembono ka-Allison, ayisiyombono intle. UAllison usebenza kwivenkile ethengisa utywala; UKevin ungumfana wentambo, ukunqwala komnye umthombo othembekileyo Yehlaya eliphantsi-eliqhelekileyo-eliqhelekileyo. UAllison unamaphupha afana nobunini basekhaya okanye umsebenzi ozinzileyo; UKevin akenzi njalo. Kwaye xa uKevin ewela umgca ngokungayinaki iminqweno ka-Allison ukuze ayithintele, into e-Allison iyaqhekeka, ibangela isigqibo esiba sisiseko somboniso. NjengoJohn Tucker phambi kwakhe, uKevin kufuneka afe.
UKevin Unako F *** Ngokwakhe Ukwahlukana kwesitayile kuyanyanzelisa kangangokuba umboniso ekuqaleni unika amandla ngombono kuphela. (Abagxeki baboniswa iziqendu ezine zesiphelo sokugqibela esibhozo.) Amacebo afanayo asisifaniso esiqaqambileyo sokusilela kweendaba ezithandwayo kunye nokwahlukana kwimitshato yobomi bokwenyani. Kungabonakala ngathi kukuphamba ngokuboniswa kwentambo ukubonisa uhlobo oluthile kubaphulaphuli bayo akunakulindeleka ukuba babukele. Kodwa ukuzithoba kufuna ukujonga phantsi, nanjengoko konke-kutsha nje UKevin unokulinda I-debacle iya kubonisa, i-stale sitcom akukho ndawo ikufutshane nokuphulukana nendawo yayo ephambili kwinkcubeko. UKevin Unako F *** Ngokwakhe akunakulindeleka ukuba uphelise ubhubhane wabalinganiswa ababhinqileyo abathandekayo. Yinjongo efanelekileyo nangona kunjalo.
Ngobudenge Kunye nesiphukuphuku: Imbali yomlomo ye 'Pros vs. Joes'
Ukuhamba ngeTightrope kukaLil Dicky kunye 'noDave' weXesha lesi-2
'I-Lupine Icandelo 2' kunye noQhekeko oluDibeneyo lokuHanjiswa kweeShedyuli
Ithiyori eqinileyo igqitywa ngokubulawa. Iindawo ezihlambulukileyo ze-sitcom ze UKevin Unako F *** Ngokwakhe Phantse umboniso ozimeleyo ngaphakathi komboniso, oneejinks eziphezulu ezinje ngeengxabano zabamelwane kunye nezikim ezityebileyo ezikhawulezayo ezidlalwe ngokuthe ngqo. Olu luhlu lunokuba lelikaMurphy, obesenza uninzi lweendaba ukunyusa inyathelo lakhe elilandelayo emva kwexesha lokugqibela le- Shit ' s watshabalalisa ubhubhane uEmmy , Kodwa uPetersen uzibophelele ngokungazenzisiyo njenge-oaf engenakulibaleka. Umboniso unolonwabo lwawo ngotshintsho olusuka kwimo enye ukuya kolandelayo. Ngamanye amaxesha, ithoni iyatshintsha xa uAllison eshiya igumbi, ngokungathi uhamba ngeenyawo kwaye uye ebomini bokwenyani. Ngamanye amaxesha, nguKevin ohamba, ethatha iziqhulo naye njengoko uAllison ehlala ngasemva.
Kodwa njengokuba UKevin Unako F *** Ngokwakhe ingena kolula phakathi, umboniso uqala ukuphuma. Eyona ndawo ibalaseleyo kumqhubi wenqwelo-moya kwenzeka xa uAllison ezamkela iimvakalelo zakhe zokwenene ngomyeni wakhe — ubutshaba, ingekuko ukuthanda nje ubuxoki. Ulandelelwano lwamaphupha, u-Allison umnika ibhiya, enxibe ii-nines kwi-Betty Draper yakhe. Kodwa ngaphambi kokuba ayisele, uyayiqhekeza ibhotile aze ayihlabe ijugular, atshise iphupha lasekhaya kwigazi elibomvu. Yinto eyoyikisayo, enobundlongondlongo, enoburharha obuhlekisayo-enye engagqibi nje ukubonwa kukaKevin kunye no-Allison, kodwa ibabetha kunye kwaye ivumele ii-shards ziwele apho zinokuthi ziye khona.
Umzuzu uziva njengesithembiso. Endaweni yoko, UKevin Unako F *** Ngokwakhe iqala ukwenza lula. Iindawo ze-sitcom, ubuncinci, zimile ngabom. (Hon, uyazi ukuba kwenzeka ntoni xa uzama ukuhlekisa! UKevin ugxeka umfazi wakhe ozeka kade umsindo.) Kungekudala, nangona kunjalo, iinxalenye zika-Allison nazo. Kukho amandla anomdla kunye nelangatye elidala elibuyela edolophini kwaye likhokele u-Allison ukuphinda aqwalasele ubomi bakhe, kodwa ubukhulu becala, isiqingatha sakhe somboniso siqhutywa yimishini-yengqondo enye: ukufumana i-OxyContin eyaneleyo yokwenza ukuba uKevin adlule kwaye adlule ikhutshwe njengengozi. Isiphumo sokusetyenziswa gwenxa kwe-opioid sinokukhutshelwa kwaye sincanyathiselwe nakweyiphi na into engeyonyani malunga iindawo ezimhlophe ezineekhola eziluhlaza ukusukela kule minyaka mihlanu idlulileyo. Inqaku le UKevin Unako F *** Ngokwakhe kukungqina ukuba uAllison ngumntu. Xa ibali lakhe liqala ukuziva lifomula, umboniso uyaziphikisa.
Ukuba uyaqhwanyaza, kukho enye inqaku elichukumisayo ekufuneka lenziwe: loo midlalo imnyama, nokuzikhathalela, ngendlela yabo, iyangqinelana kwaye iyadibanisa njengeefektri ezihlekisayo UKevin Unako F *** Ngokwakhe iithagethi ngaphambili. (Njengoko Abakhuseli bakaSkyler White bangangqina, iidrama zodumo zinoluhlobo lwazo lomfazi obulawelwe ukholo, kunye namadoda amhlambalazayo.) Nokuba UKevin Unako F *** Ngokwakhe iphela ikhomba oku, nangona kunjalo, kubonakala ngathi ayinanjongo zininzi. Kukho indawo eyaneleyo yokushukumisa ubume bemiboniso kwisiqingatha sexesha esisele. Okwangoku, UKevin Unako F *** Ngokwakhe toggles phakathi kweefomathi ezimbini ezinesitayile xa inethuba lokuzixuba kunye nokuzilungisa. Ngaba uKevin angawelela kwicala lika-Allison? Kwenzeka ntoni xa esenza njalo? Ngaba kukho uhlobo lwendawo ephakathi phakathi kwezi zinto zimbini zigqithileyo? UKevin Unako F *** Ngokwakhe ingahambisa iimpendulo kamva, kodwa iziqendu zamva zitsalela ngokwaneleyo ukuba loo mibuzo iqhuba ngokungathandabuzeki kunebali lokwenyani.
Okwangoku, amanye amalaphu esiliva ahleli. Ulwalamano olubaluleke kakhulu lomboniso alukho phakathi kuka-Allison noKevin, okanye no-Allison kunye nomdla wothando olunokwenzeka kuSam (uRaymond Lee). Umntu onoxanduva lokuvusa uAllison kubuthongo bakhe endaweni kaPatty (Mary Hollis Inboden), umntu owenza iinwele okwangudade kaNeil. (Ngokwenene umdlalo we-sitcom, udadewabo wommelwane ngandlel 'ithile ubukho obuhlala buhleli kubomi besibini esiphakathi.) Kodwa ukudibana phakathi kuka-Allison noPatty akuyiyo nayiphi na into esisiseko njengobumbano lodade; kunokuba, ngumdibaniso ontsonkothileyo wenzondo, intlonipho, uvelwano nomona. Khange ndicinge nyhani ngathi 'si', u-Patty uyamgculela, nanjengoko evuthulula ubomi buka-Allison ngokutyhila ubugwenxa bukaKevin. Ngokwendalo, ubudlelwane buyaguquka. Ngokungafaniyo nesiqingatha se UKevin Unako F *** Ngokwakhe , nangona kunjalo, iyasilela kwiingcinga ezikhohlakeleyo kwasekuqaleni.
Bhalisela iIncwadana yeRinger
Jonga ibhokisi yakho engenayo ukuze wamkele i-imeyile.
owayecula ihlelo lobuntu
Imeyile (iyafuneka) Ngokusayina, uyavuma kuthi Isaziso sangasese kunye nabasebenzisi baseYurophu bayavuma umgaqo-nkqubo wokudluliswa kwedatha. Bhalisa
usuku lwenkululeko russell casse
iinkokeli zokwamkela nfl 2017
superbowl 41 isiqingatha sexesha show
emnyama hole lyrics
Ibali lokwenyani ledey cox
Uhlalutyo loyilo lwe-2019